IMIBALA ENGAPHAMBILI YOMNYANGO (IINGCAMANGO ZEPEYINTI KUNYE NEENTSINGISELO ZOMBALA) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Imibala engaphambili yoMnyango (Iingcamango zePeyinti kunye neentsingiselo zoMbala)
Wamkelekile kwigalari yethu ebonisa imibala engaphambili yomnyango kunye nokuphonononga iintsingiselo zawo. Umbala womnyango wangaphambili yenye yeendlela ezilula ukongeza isibheno sokunqanda kwikhaya. Ikwalithuba elifanelekileyo lokwenza indlu yakho igqame kwabanye. Umbala owahlukileyo wombala unokujika kwangoko ubumbeko obutofotofo ube ngumtsalane wamehlo ekhayeni lakho. Ingaphandle lendlu yindawo efanelekileyo yokuhlola ukuba ujonge imibala emininzi yokubonisa incasa kunye nesitayile somntu.
Kukho uluhlu olubanzi lwemibala engaphambili yomnyango umntu anokukhetha kuyo kwaye i-hue nganye ibonisa intsingiselo ethile. Ukukhetha umbala olungileyo kunokuba ngumsebenzi owoyikisayo ngenxa yezinto ezininzi onokukhetha kuzo. Umnyango wangaphambili ungaphezulu kokungena nje ekhayeni lakho. Inika abantu ukujonga ngokukhawuleza kobuntu bakho kwaye ibonise indlela yakho yokuphila ngendlela elula. Bathi umnyango wangaphambili usisipili sobuntu bakhe kwaye sinjani njengomntu.
Amagqabantshintshi okuqala aqala apha ke kubalulekile ukuba uthathe ingcinga enononophelo ekuthatheni isigqibo ngendlela ofuna ukuba ibukeke ngayo Abanye bayisebenzisa ukwenza ingxelo ebalaseleyo enesibindi ngelixa abanye bekhetha ubuqhetseba ngokuchaseneyo. Nokuba ukhetha ntoni, kubalulekile ukwazi ukuba umbala wangaphambili womnyango uthetha ntoni kwaye uchaphazela njani umbono wabantu abakungqongileyo.
Funda njengoko sithatha esi sikhokelo sokugqibela kwiingcango zangaphambili. Yazi ukuba ukhetha ntoni ngombala wakho malunga nekhaya lakho.
Nguwuphi umbala wokupenda umnyango wam wangaphambili
Amacango angaphambili aBala
Iintsingiselo zoMnyango woMnyango ongaphambili
Imibala ebomvu yoMnyango oBomvu
Indlu etyheli enocango oluBomvu
Indlu eBlue eBomvu emnyango
INdlu ye-White kunye noMnyango oBomvu
Imibala yeBlue Front Door
Indlu etyheli kunye neBlue Front Door
Umbala oKhanyayo oLuhlaza oMnyango
Umnyango wangaphambili weNavy
Umnyango ongaphambili oMthubi
Indlu eBlue ngeNdlu engaphambili yoMthubi
Umnyango wangaphambili omnyama
Umnyango ongaphambili wePinki
Umnyango wangaphambili weTeal
Umnyango ongaphambili we-Orenji
Umnyango oMhlophe ngaphambili
Umnyango ongaphambili omfusa
Umnyango oLuhlaza wangaphambili
Ingcango engaphambili yeGrey
Umnyango ongaphambili weBrown
Imibala engaphambili yoMnyango weNdlu eBrown
Nguwuphi umbala wokupeyinta uMnyango wangaphambili weNdlu yeBegi
Imibala yangaphambili yoMnyango weGrey House
Imibala engaphambili yoMnyango weNdlu eNtsheli
Imibala engaphambili yoMnyango weNdlu yeBrick ebomvu
Imibala engaphambili yoMnyango waMakhaya eBrown eBrown
Imibala yangaphambili yoMnyango weNdlu eNtshonalanga
Imibala yoMnyango weFeng Shui
Ukudweba Iminyango kunye nokuCoca imibala eyahlukeneyo
Ukukhetha umbala emnyango wangaphambili akudingi zakhono zobugcisa kodwa akukho lula njengokukhetha umbala owuthandayo uze uwubeke ekungeneni kwekhaya lakho. Iingcango zangaphambili zenza impembelelo enkulu ekuthatheni isigqibo ngombala ogqibeleleyo kuba kufuneka zicingisiswe kwaye ziqwalaselwe.
Nangona kungekho mthetho jikelele wokudibanisa kunye nemibala ehambelana nomzi wakho, zininzi iindlela onokuzisebenzisa ukuthatha uqikelelo ekukhetheni umbala womnyango wangaphambili. Ezi zinto zoyilo (1) bubuntu bakho, (2) uyilo lwasekhaya kunye nesimbo sakho kunye (3) namandla ekhaya lakho ngokusekwe kwimigaqo yeFeng Shui kunye (4) nezikhokelo zemibala usebenzisa ivili lemibala.
Sebenzisa isitayile sekhaya lakho . Uhlobo lwakho lwasekhaya kunye nemibala yalo sisikhokelo esihle sokubona ukuba yintoni esebenzayo nengasebenziyo xa kufikwa kumbala womnyango wangaphambili. Uhlobo ngalunye loyilo luhlala luhambelana nombala othile. Amakhaya aphefumlelweyo akudala ahlala engenalo ixesha kwaye emhle kangangokuba umnyango wangaphambili omhlophe ujongeka ulungile kuwo.
Amakhaya esiNtu ahlala enombala otyebileyo owenza ukuba iingcango ezinombala omnyama ontsundu zilingane. Amakhaya e-Cottage athabatha ukhuthazo kwindalo yiyo loo nto imibala yawo ihlala inomtsalane njengokuluhlaza okanye ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. Izindlu zale mihla zihlala zihamba ngeephalethi ezincinci kunye nepop yombala efana nomnyango obomvu okanye okalika oluhlaza.
Qiniseka ukuba umnyango wakho wangaphambili uhambelana kakuhle nesimbo sekhaya lakho, iimpawu zalo, kunye nokusingqongileyo okungqongileyo. Ukutshatisa imibala yomnyango wangaphambili kunye Imibala yomnyango wegaraji iqhele ukwenziwa. Nangona kunjalo ukwenza uyilo oluhambelanayo umbala ohambelana nokusebenzisa ivili lombala unokusetyenziswa kunye neziphumo ezilungileyo. I-caatat yoku ifunyenwe kumakhaya esitayile esiko ahlala ehambelana nemibala yomnyango wangaphambili, ifestile kunye negaraji kunye.
Ngaba i-rsvp imele
Sebenzisa ubuntu bakho . Indlu yakho iyimbonakalo yesiqu sakho. Ukukhetha umbala womnyango wakho wangaphambili yindlela yokubonisa eyodwa, ubuqu kunye nobuchule bokuyila. Ukufakela ubuntu bakho kumbala womnyango wakho wangaphambili kwenza ikhaya lisondele entliziyweni enye kuba likubonisa ngokuthe ngqo. Kuyaziwa kwakhona ukuba umbala wendlu yakho yangaphambili ubonakalisa uhlobo lwekhaya onalo kunye nohlobo lomntu olulo. Ezi ntsingiselo zombala kunye noko ikutshoyo ngobuntu bomntu kuya kuxoxwa ngayo njengoko sihamba kwinqaku lethu.
Usebenzisa amandla ekhaya lakho . Indlela yeFeng Shui imalunga nokulungelelanisa ukuhonjiswa kwekhaya lakho ukuze ukwazi ukusebenzisa amandla aqinisekileyo. Ngokwemigaqo yayo, imibala engaphambili komnyango idlala indima ebalulekileyo koku. Funda malunga nokuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nokukhetha imibala engaphambili yomnyango ngokwemithetho yeFeng Shui.
Sebenzisa ivili lemibala. Kuyanceda kakhulu Qonda imibala esisiseko xa ukhetha umbala ongaphambili kwindlu yakho . Kukho isayensi esisiseko ebandakanyekayo esusa ukudideka ekuthatheni izigqibo malunga noku. Ivili lemibala sisixhobo esilula sokuhombisa esetyenziselwa ukusetyenziswa koyilo ukwenza imibala yemibala ehambelanayo. Ngokusekwe kwivili lombala, kukho indibaniselwano yemibala eyahlukeneyo umntu anokuyisebenzisa xa ukhetha umbala wangaphambili womnyango obizwa ngokuba sisikimu sombala esincedisayo, isikimu sombala ofanayo, iskimu sombala we-monochromatic kunye nesikimu sombala ongathathi hlangothi.
Inkqubo ye- Isikimu sombala esincedisayo isebenzisa imibala ejongene nenye kwivili lemibala (ebomvu neluhlaza, luhlaza okwesibhakabhaka kunye neorenji, tyheli nemfusa). Oku kugqibelele ukuba ufuna ukongeza umahluko kunye nokwenza amandla aphuculweyo kunye nokuziva okumangalisayo kwendlu yakho yangaphandle. Umzekelo, indlu ebomvu enezitena ebomvu inokufumana umbala wenqindi kumnyango ongaphambili womnquma oluhlaza, indlu emhlophe etyheli yendlu ijongeka inomtsalane ngomnyango omfusa. Kwelinye icala, isikimu sombala ofanayo sisebenzisa imibala efumaneka ecaleni kwelinye kwivili lemibala (umzekelo: luhlaza omthubi, luhlaza, luhlaza okwesibhakabhaka).
Izikimu zemibala engafaniyo ziyahambelana kwaye zithobile. Imibala inokuhlengahlengiswa ukuze ibenze bathule ngakumbi. Kukwalungele nezindlu zangoku. Umzekelo, ikhaya lezitena elibomvu elinomnyango obomvu o-violet wangaphambili unika indawo yokungena efudumeleyo kwaye imema.
Olunye ukhetho kukukhetha Iskimu sombala we-monochromatic isekwe kumaxabiso ahlukileyo ombala ofanayo. Ngokukodwa inemibala eyahlukeneyo, amaxabiso amnyama, okanye iithoni, angamaxabiso alula. Ukongeza ubunzulu kunye nomdla obonakalayo, ukugqitywa kunye neempahla zomnyango onzima zihlala zinikwa inqindi. Esi sikimu sombala silungile ukuba ufuna ukunika indlu yakho yangaphandle inkangeleko ebanzi. Umzekelo indlu emhlophe inokuba nomnyango wokhrimu wangaphambili ukuze ubonakale umkhulu.
Okokugqibela, i Inkqubo yombala ongathathi hlangothi isebenzisa umbala omhlophe, omnyama, ongwevu kunye nomdaka ngombala wombala. Oku kufanelekile kakhulu kubanini bamakhaya abafuna ukufikelela kwinkangeleko engapheliyo. Umzekelo olungileyo unokuba likhaya elimdaka ngezitena elinomnyango omhlophe.
Ezinye izikhokelo zokugcina engqondweni xa ukhetha umbala ofanelekileyo wangaphambili kwindlu yakho:
Sebenzisa umnyango wangaphambili ukwenza ifuthe . Umnyango wangaphambili yile nto iindwendwe zakho zihlala zibona kuqala xa zingena ekhayeni lakho, ke sebenzisa ngobulumko ukwenza ingxelo. Ikwaqwalaselwe njengelithuba elifanelekileyo kumbala. Kulabo bafuna nje umbala wombala umnyango wangaphambili uhlala ukhethwa ngokukodwa, kunye nengaphandle yekhaya usebenzisa iphalethi eyahlukileyo.
Thatha isigqibo sokuba uyafuna umahluko okanye umxube . Ukukhetha umbala womnyango wangaphambili ongafaniyo nombala wendlu wakho wangaphandle uqondisa ingqalelo ekhayeni lakho, okwenza ungeno oluphambili lube yindawo ephambili ekugxilwe kuyo. Izindlu ezinendawo esecaleni zokukhanya zinobunzulu obungaphezulu ukuba zidityaniswe nomnyango ongaphambili omnyama kwaye ikhaya elimnyama elinomnyango oqaqambileyo ngaphambili linobukhulu obungaphezulu.
Kulo mfanekiso sinokubona indlela eyahlukileyo ngayo iminyango yangaphambi kweminyango enika izindlu zangaphandle umlinganiswa othile. Ukusuka kwindlela eqhelekileyo yokungena emnyango omhlophe omhlophe ukuya kumtsalane ohehayo womnyango obomvu wangaphambili - nganye isebenza njengomboniso owahlukileyo womlinganiswa kunye nokuthanda kwakhe.
Umbala uthathwa njengenxalenye ebalulekileyo yophawu. Imibala esiyikhethayo ngaphakathi kwendlu yethu kunye nezinto ezingaphandle zithetha kakhulu ngobuntu bethu. Kukwaziwa njengesixhobo sonxibelelwano kwindalo yonke esinceda ukuba sidlulise kwaye sichaze iimvakalelo ezithile kunye neemvakalelo. Ngokujonga nje kwiminyango yethu yangaphambili, iindwendwe zethu zinokuba nombono wokuba amakhaya ethu anjani okanye sinjani thina.
Umbala ukwaziwa ngokuvelisa iimvakalelo kwaye unxulumene nokuziphatha kwabantu. Kukho isifundo esibizwa ngokuba yi-Colour Psychology esichaza ukuba imibala inefuthe elikhulu kwiimvakalelo zethu, iimvakalelo, iimvakalelo kunye nokuziphatha. Ngenxa yoko, imibala esiyikhethele iingcango zethu zangaphambili kunye nezindlu zinokuchaphazela imeko yethu nayo. Imibala eshushu njengombala ubomvu, tyheli kunye no-orenji inokubangela ubushushu kunye nokuzithemba. Ngelixa imibala epholileyo enjengeblue, violet kunye nohlaza ikhupha imvakalelo ezolileyo.
Ke siyabona, ukukhetha umbala emnyango wangaphambili kufuna ingcinga enkulu. Kweli nqaku, siza kube siphonononga iintsingiselo zemibala eyahlukeneyo engaphambi kweminyango kunye nemibono efanayo yokukunceda uthathe isigqibo sokuba yeyiphi eyona ilungileyo kwikhaya lakho.
Iingcango zangaphambili ezibomvu zinika inqindi elinamandla emakhaya. Ngaphandle kokwenza isitatimende esinesibindi, ukupeyinta umnyango wangaphambili ngombala obomvu ngokuqinisekileyo kuya kuyenza indlu yakho ibonakale. Iingcango ezibomvu ngokubanzi zibonisa imvakalelo yokwamkela kwaye zinike iindwendwe uvakalelo olumemileyo. Ke ukuba ufuna ukuba iindwendwe zakho ziziva kwangoko ukubuk 'iindwendwe nje ukuba zingene kwiveranda yakho, emva koko inokuba ngumdlalo ofanelekileyo kuwe. Ikwahambisa ukudlamka, uthando, ulonwabo kwaye ugcwele imeko yobomi. Ngokwemigaqo ye-feng shui, umnyango obomvu ubonakalisa ukuhamba kwamandla kunye nenhlanhla.
Kukho imibala emininzi ebomvu ehambelana kakuhle neminyango yangaphambili. Ngaphandle kwenjini ebomvu yomlilo okanye i-merlot ekhangayo, ezinye iinketho zibandakanya i-burgundy-efanelekileyo kulabo abafuna umbala wangaphambili womnyango kodwa bengathandi ukunyaniseka, ubomvu obomvu-ukuthabatha okwangoku okwenza umnyango ogqithiseleyo amakhaya newayini ebomvu
Lo mnyango ubomvu kwangoko uhlala uqaqambisa eli khaya. Le hue ekhwaza inkanuko ime ngokuchaseneyo ngokuchaseneyo ne-beige house sidings kunye neendawo ezimnandi eziluhlaza.
Indlu etyheli enomnyango wangaphambili wokurenta kunye nezinto ezimhlophe ezimhlophe ngumbala ogqwesileyo wombala ongaphandle kwekhaya lekhaya. Ukudibanisa i-cheery ambiance etyheli kunye nokuqina kobomvu, ukungena kwale ndlu kushiya imvakalelo yokwamkela iindwendwe.
Ucango olubomvu lwangaphambili xa longezwe kumbala oluhlaza we-cornflower lwenza umahluko ekubambeni kwamehlo okhokelela ekungeneni kumnyango ongaphambili wendlu.
Indibaniselwano yeklasikhi, le ndlu imhlophe enomnyango obomvu ngaphambili iyisitophu sokubonisa njengoko iyalela ingqalelo kwaye yenza isimemo esifudumeleyo seendwendwe ukuba zisonwabele. Ukongezwa okuncomekayo kwezivalo eziluhlaza, iidrapes eziluhlaza zeefestile kunye neebhalansi zamagqabi aluhlaza zibeka ukujonga ngokubanzi kwale facade.
Ngokwezifundo ezininzi, umbala oluhlaza okwesibhakabhaka ngowona mbala uthandwayo kwiingcango zangaphambili. Lo mbala uthathwa njengobukhosi kwaye usisityebi kodwa uyonwabisa kwaye uyonwabisa. Okukhumbuza amanzi kunye nezulu, luhlaza okwesibhakabhaka kukwaqwalaselwa njengophawu lokucoca kunye nokuntywila. Izindlu ezineminyango eluhlaza okwesibhakabhaka zibonwa njengendawo yokubalekela-ezolileyo, ezolileyo, ezolileyo kunye nendawo yokuphumla. Ngelixa abantu abaneengcango zangaphambili eziluhlaza emakhayeni abo bahlala benobuntu obuhamba kwaye bahlala benomtsalane kwabanye. Kukwakholelwa ukuba ngumbala wokucinga, amaphupha kunye nenkuthazo, ke ukuba ungumculi unokufuna ukuqaphela oku kumnyango wakho wangaphambili.
Imibala ethandwayo eluhlaza okwesibhakabhaka esetyenziselwa iingcango zangaphambili zinzulu-ngokusesikweni kwaye zisesikweni, zenziwa mthubi kwaye zathotywa kwaye zinothuli oluhlaza okwesibhakabhaka - ukukhanya nokuthandeka.
Ucango lwangaphambili oluhlaza okwesibhakabhaka luzisa ukuzola kumbala ofudumeleyo wezitena ezibomvu kule ndlu ingaphandle. Kusesikweni, ngokwesiko kodwa kunomdla kakhulu.
Umnyango ongaphambili oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nendlu etyheli yenye yezona ndawo zithandwayo zangaphandle zemibala. Olu cango lwe-cobalt luhlaza longeza into ephikisanayo kodwa enomtsalane kwibala elimthubi lendlu-njengoko ubona ukuba iyahambelana nemibala yeentyatyambo egadini. Intle kangakanani!
Umbala wokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka usikhumbuza ulwandle kunye namanzi acocekileyo ukuze lo mbala ufanelekile kubanini bamakhaya abanolo luhlobo lolwandle lukhululekileyo lwengqondo. Umnyango okhanyayo ohlaza okwesibhakabhaka uhambisa ukuzola noxolo. Amakhaya anomnyango oluhlaza okwesibhakabhaka aqhele ukubonwa njengendawo yokubaleka kwihlabathi elixakekileyo. Le hue ipholileyo iluhlaza ikwabonisa ukuzola kunye nokumema.
Ebekwe ngokuchasene nemvelaphi e-rustic yezitena ezimdaka kunye nemidiliya yokunyuka ekhanyayo, oku kuqabulayo okuluhlaza okwesibhakabhaka emnyango wangaphambili kulungelelanisa ukujonga okuxekethekileyo kwendlu yale ndlu ngokuzisa umoya wokuzola okusikhumbuza ulwandle.
Umnyango wangaphambili o-blue blue onemibala awuyitshintshi imbonakalo yawo kwaye awuphumi ngesitayile. Ijongeka intle phantse naluphi na uhlobo lokuhonjiswa kwaye isebenza kakuhle ngwevu okanye indlu ekhanyayo eluhlaza. Lo mbala une-vibe eyahlukileyo yeediliya kwaye uyathandwa ngabaninzi kuba umbala wawo ubonakala ngathi uyatshintsha ngokubhekisele kwixesha losuku.
Umnyango ongaphambili oluhlaza okwesibhakabhaka umele ukhuseleko, ukhuseleko kunye nozinzo. Ikhupha uxolo kwaye idale imeko yoxolo kwabo bangena ekhayeni lakho. Ukuba ucinga ukuba ikhaya lakho liyindawo ekhuselekileyo, sebenzisa ucango oluhlaza okwesibhakabhaka ukuphinda oko. Ngokwemigaqo ye-feng shui, ikwabonisa ubuninzi kwaye imele into yamanzi.
Idityaniswe ngamatye agxibisayo afanayo, amacala enemibala ye-beige kunye ne-white trims, lo mnyango ungaphambili oluhlaza okwesibhakabhaka uqhubeka kunye nobume bangaphandle ngelixa usongeza umbala ophantsi. Iingcango zangaphambili zomhlaza wamanzi eziluhlaza zezona zilungele iminyango emnyama kwaye zilungele abaninimzi abangafuni ukuzibophelela kubunzulu bemibala eqaqambileyo.
Ukuba ufuna ukuphakamisa imimoya yakho emva kosuku oludinayo emsebenzini kwaye ufumane ulonwabo kwindlu yakho, peyinta umnyango wangaphambili umthubi. Mthubi uthathwa njengombala owonwabileyo. Xa kuthelekiswa neminye imibala, ibonisa ukukhanya ngakumbi, ngaloo ndlela ukhanyise ngokukhawuleza izithuba kwaye unike imvakalelo efudumeleyo neyamkelekileyo ngaphandle kwekhaya lakho. Umnyango wangaphambili otyheli unika umbala ongalindelekanga kwikhaya lakho kwaye uvuselele ngokulula i-facade ekruqulayo.
Umnyango wangaphambili otyheli ufuzisela ukucaca kwengqondo, ukonwaba, ubulumko, ukuzithemba, ubuchule kunye nengqondo. Lo mbala uqaqambileyo ukhuthaza intlawulo entle kunye nomtsalane wethemba. Iingcango zangaphambili ezimthubi nazo zinezithembiso zekamva eliqinisekileyo. Abanini bamakhaya abaneengcango zangaphambili ezityheli bahlala babonwa njengabantu abonwabisayo, ukuma ngaphandle kwaye kuthathwa njengeenkokheli zepakethe. Ukuba ufuna iindwendwe zakho ziziva zisonwabisa rhoqo xa zingena ekhaya, umnyango otyheli wangaphambili ungangumdlalo ofanelekileyo kuwe.
Ngaphandle kokuba yinto yomtsalane weklasikhi, lo mnyango ungumbala ophuzi omthubi uhlanganisa uyilo lwale ndlu ingwevu imbi kunye nomhlaba ojikeleze eli khaya lasekhaya.
Kushushu kwaye kuziwe nomtsalane wethemba, lo mnyango ungaphambili otyheli kwangoko uzisa ulonwabo kunye nemvakalelo enelanga kule ndlu yezitena igcweleyo iibhokisi zeentyatyambo zefestile .
Le ndlu yanamhlanje inomnyango oqaqambileyo otyheli ecaleni kwepaneli eqinileyo yeglasi eyinika uyilo olwahlukileyo.
Umbala omnyama uqhele ukuhambelana namandla, amandla kunye negunya. Inokutsala ingqalelo kwaye inokuvusa iimvakalelo ezinamandla. Umnyango wangaphambili omnyama ufuzisela i-conservatism, ukungaguquguquki kunye nokubhuka.
Ubuhle bokusebenzisa umbala omnyama kumnyango wakho wangaphambili kukuba unikezela ngenkangeleko engapheliyo, okuthetha ukuba ayizukuphuma kwisitayile ngaphandle kweendlela ezahlukeneyo-cinga ngayo njengengubo yakho emnyama omthandayo. Umnyango olula omnyama wangaphambili uquka ukucoceka kunye nobuhle, ukunika ikhaya umbono wobuhle obucokisekileyo.Nangona abanye besenokuyithatha ngokungalunganga njengoko ihlala ikhupha imvakalelo yokungenanto, iingcango zangaphambili ezimnyama ngokwenyani zinobuhle kwaye zihonjisiwe ngokuchaseneyo.
Idityaniswe neentsika zamatye ezigxininisayo, amacwecwe amhlophe kunye nezixhobo ze-antique, lo mnyango ungaphambili omnyama omnyama uzisa ingxelo ebukhali nenhle kwibala lendlu engwevu.
Iphe inki Ingcango yangaphambili
Ipinki ihlala inxulunyaniswa nayo nayiphi na into yothando. Ukuthathelwa ingqalelo njengombala wolonwabo, kukhupha iimvakalelo ezimnandi nezinomdla. Umnyango ongaphinki uphawula ubutsha,ukukhanya kunye nokuthatha umngcipheko. Abanini bamakhaya abaneengcango zangaphambili ezipinki bahlala bebonwa ukuba bonwabile, banesisa kwaye bacinga.Ikwajongwa njengombala weediliya, uhlala unxulunyaniswa neephalethi ezinombala omnyama, omhlophe kunye nepinki eshushu. Ijongeka ilungile ngokukodwa kwizindlu zamakhaya, izindlu zezitena kunye nezindlu ezimhlophe.
Ukunikezela ngomtsalane wothando kule ndlu intle kangaka, lo mnyango uphinki ngokudibeneyo uhambelana nokudubula okupinki, obomvu kunye neentyatyambo ze-fuchsia.
Ukuba ufuna into yendabuko engadinisiyo, umnyango wangaphambili we-teal ngumdlalo ofanelekileyo kuwe. Inokutshatisa phantse nasiphi na isitayile yoyilo, ukusuka kubume bokwakhiwa kwembali ukuya kuthi ga kwisitayile se-eclectic esingapheliyo. Iingcango zangaphambili zeteyili zikwangumdlalo ogqibeleleyo wendlu enezinto zomthi ezipheleleyo okanye umphandle omhlophe. Umdaka ngumbala opholileyo osikhumbuza ngokuzola kwesibhakabhaka. Iingcango zangaphambili ze-Teal zifanekisela ubuchule kwaye zinokunyusa ukuphilisa ngokweemvakalelo.
Lo mnyango wangaphambili we-teal uthatha isigaba esiphambili njengoko uphuma ngaphandle kwezitena ezimhlophe kunye nomnyango wepikethi omhlophe. Kunye Uhlobo lomnyango waseFrance uyilo luvumela ukukhanya kwendalo ngakumbi kwaye longeza umtsalane oqaphelekayo kwisibheno sokunqanda ikhaya.
Lo mnyango weti wangaphambili unika inqindi ehlaziyayo kwimfudumalo yale ndlu yangaphandle yezitena zangaphandle.
Nguwuphi omnye umbala ongcono onokumela ubushushu obamkelekileyo ngaphandle kweorenji? Lo mbala udibanisa uvuyo olubomvu kunye nolonwabo oluphuzi. Yicinge njengeyona nto iphambili kwindlu ekhanyayo. Iorenji ikwakholelwa ukuba ingumbala we-extrovert kuba ihambelana nabantu abanothando, ubuntu obunobuntu kunye nobuntu. Ikwabonisa amandla, ubumnandi kunye nomdlandla.
Umnyango ongaphambili weorenji sisitatimende esinesibindi esinokutsala umdla wabantu kwaye sibenze bazive bemenyiwe ekhayeni lakho. Kuthathelwa ingqalelo njengombala wokumisa umbala, umnyango wangaphambili weorenji ulungele abaninimzi abafuna ipunch yombala kumakhaya abo anamhlanje. Umdlalo ogqibeleleyo we-minimalist kunye nolungelelwaniso lwezitayile zoyilo.
Umnyango wangaphambili weorenji uphucula isibheno sokunqanda eli khaya laseMelika lingwevu. Le hue ibengezelayo inika ukuva ubumnandi kule palette yeli khaya ithulisiweyo.
Umhlophe uyaziwa njengombala wobunyulu. Umbala wayo omdaka uhambisa ucoceko kwaye unike umbono wokulungelelaniswa kwamakhaya. Umnyango wangaphambili omhlophe ufuzisela inzolo, uxolo kwaye unokubonisa isiqalo esitsha. Ngokwemigaqo ye-feng shui, umnyango omhlophe umele ukungathathi cala. Nangona ingatsali amandla e-feng shui, inokuqulatha.
Umbala omhlophe uthathelwa ingqalelo njengombala osilelayo ngenxa yokuguquguquka kunye nokuguquguquka okubonelelwa ngoyilo. Nangona ihlala isetyenziselwa izinto zakudala ezisesikweni, ucango lwangaphambili olumhlophe lunokuhamba kakuhle nangawo nawuphi na umbala ongaphandle kunye nokhuthazo loyilo. Yindlela egqibeleleyo yokukhanyisela izinto ezimnyama zangaphandle kunye nokwenza umahluko kwiphalethi. Ngaphandle kwemhlophe kukhangeleka kuhle ngeengcango ezimhlophe njengayo yonke into emhlophe engaphandle enoxolo.
Iingcango zangaphambili ezimhlophe ziyingxelo yeklasikhi yamakhaya emveli. Kulo mfanekiso siwubona ukuba unikezela njani ukucoceka okucocekileyo kwistucco engwevu ngaphandle.
Umnyango ongaphambili omhlophe wophula uburhabaxa, ubushushu kunye nokubukeka kwe-rustic yamatye kunye nezitena kweli lizwe langaphandle.
Umbala omfusa uyaziwa ngokuba ngumbala wobukhosi. Lo mbala umele ubutyebi, imbeko kunye nokunyaniseka. Idibanisa amandla akhuthazayo obomvu kunye noxolo lokuzola oluhlaza okwesibhakabhaka.
Umnyango ongaphambili omfusa usenokuba lolona khetho luthandwayo kwindlu engaphambili. Kodwa umbala ocebileyo omnyama unika i-regal flair kwaye wenza izindlu ziziva zamkelekile. Abanini bamakhaya abaneengcango zangaphambili ezimfusa nazo zihlala zibonwa njengezingqondo ezivulekileyo, ezobugcisa kunye namaphupha akhululekileyo. Kwi-feng shui, ithathwa njengombala oguquguqukayo kakhulu njengombala kuphela onokusetyenziswa kuyo nayiphi na indlela.
Umnyango ongaphambili osisityebi obumfusa luphawu olugqibeleleyo lwendlu ebomvu yezitena enemibala emhlophe njengoko izisa ingxelo engalindelekanga kunye ne-regal flair.
Luhlaza ngumbala wendalo. Yinto ephilayo kakhulu kwaye ibonakalisa ukutsha, ukuphilisa kunye nokukhula. Lo mbala umele ukulinganisela, ukhuseleko kunye nokuvisisana. Umnyango ongaphambili oluhlaza ucebisa ukuba abaninimzi bakhathalele kakhulu ikhaya kunye noluntu. Oku kuhlala kunxulunyaniswa namaxabiso emveli kwaye kuhambelana neempawu ezintle ezinqweneleka kakhulu ekhaya.
Umnyango ongaphambili oluhlaza usebenze kakuhle ngombala ongwevu, omdaka okanye omhlophe. Ukuba ufuna ukubonisa umahluko ongaphezulu, umnyango oluhlaza okalika unokukwenza indlu yakho ibonakale ekuhlaleni. Ezinye izithunzi ezinje nge-moss green, ihlathi eliluhlaza, umnquma kunye nesage zilungele ukungqubana okungangqalanga kwimibala yamakhaya emveli.
Umnyango wangaphambili womnquma oluhlaza uhambisa imvelo kwindalo eluhlaza kunye nebrawuni yamatye okuhombisa, iiseyile zomthi kunye nophahla lwe-shingle. Idityaniswe neminye imisonto yesilumko, ubulembu, ihlathi eliluhlaza kunye nengca eluhlaza, le ndlu ibonakala indalo.
Ukuthatha ngokungacacanga ngakumbi kumbala oluhlaza- le ndlu irussian yasebenzisa umnyango weti eluhlaza phambi kwentsimbi emnyama.
Umbala grey yenye yexesha elingathathi hlangothi elisebenza kakuhle ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo. Ukubonisa amandla, lo mbala umele ubuhle bobuqili. Nangona ihlala ichazwa njengombala odinisayo, ingwevu ayikhe iphume ngesitayile kwaye iyenye indlela elungileyo yokungathathi hlangothi ngokwesiko njenge-white kunye ne-beige.
Umnyango ongwevu uphakamisa ukuzola kunye nozinzo. Ubumnyama umbala buya buba, kokukhona buba mandundu ngakumbi. Iingcango zangaphambili ezingwevu zikwanika nemfihlelo. Lo mbala ulungele ukudala ibhalansi kwizinto eziqaqambileyo zangaphandle kunye nokuhlaziya ukubonakala kwamakhaya emveli.
Lo mnyango ungwevu wangaphambili wenza umahluko othulisiweyo ngokuchasene nayo yonke imvelaphi emhlophe. Ukongezwa kweentyatyambo ezimibalabala kunye neentyatyambo ezinqabileyo zentyatyambo zenza le porch ingaphambili ibe nomtsalane.
Umbala omdaka ngamanye amaxesha unokuzisa imiyalezo edibeneyo kwisayikholoji yombala, kodwa ngokubanzi, ibonisa ukhuseleko kunye nokhuseleko. Umbala womhlaba kwaye uhlala unxulunyaniswa nayo nantoni na yendalo. Umqondiso womhlaba, ubonakalisa ubume nozinzo.
Umnyango ongaphambili omdaka uzisa ubumnandi ekhaya. Nokuba, ipeyintiwe okanye inamabala, le hue yakudala inegalelo kwimfudumalo kwizinto zangaphandle kwaye yenza iindwendwe ziziva zisekhaya. Ikwangumbala oqinileyo kwaye izisa ingxelo ehlaziyiweyo ngaphandle. Abo bakhetha umbala omdaka ngombala womnyango wabo wangaphambili babonwa bethembekile.
Iingcango zangaphambili zeBrown ezenziwe ngomthi zihlala ziyinto eqhelekileyo kwizindlu zesintu nezangoku. Amabala atyebileyo avelisa ubuhle bendalo beenkozo zomthi kwaye enze iingxelo ezimangalisayo ze-facade. Kwakhona, ukuba ufuna iphalethi yangaphandle ye-monochromatic, iingcango zangaphambili ezimdaka yeyona nto ukubheja kwakho njengoko isebenza kakuhle nezinto zangaphandle ezinemibala yomhlaba kunye nesanti.
Umnyango ongaphambili omdaka uqhelekile kodwa usebenza kakuhle nakwimeko zangoku. Lo mnyango ungumbala omdaka uzisa ukonwaba kwendalo kweli khaya.
Izindlu zaseBrown zinetoni efudumeleyo yendalo. Xa ukhetha umbala ongaphambi komnyango wendlu emdaka, okona kulungileyo kukuhamba ngezikimu zemibala eminye. Iithoni ezikhanyayo nezimnyama zokudityaniswa okumdaka ngokudibeneyo kunye kwaye zenza izindlu zibonakale zicocekile kwaye zihlala ekhaya.
Yesiko okanye yeklasikhi: Umbala oluhlaza omnyama onemihombiso emhlophe, imibala etyebileyo enjengemaroon okanye i-burgundy, ipeyinti emdaka okanye amabala eenkuni afana ne-mahogany, i-walnut, njl.
Namhlanje: Mnyama, mhlophe kunye namabala amdaka
Imibala emihle yile: Iphalethi yemibala yemonochromatic ibandakanya iipeyinti ezimdaka njenge-tan, mocha, isanti okanye amabala emithi afana ne-mahogany, i-walnut, njl.
Ucango lwangaphambili oluhlaza okwesibhakabhaka lubonisa ukuzola phakathi kwenkuni efudumeleyo kunye nendlu yamatye ngaphandle. Idityaniswe ngombala omhlophe, ihlaziya imbonakalo yeklasikhi yeli khaya lesiqhelo.
Umbala we-monochromatic njengombala omdaka omdaka / we-beige kakuhle ngokuchasene nepeyinti emnyama emdaka yangaphandle yekhaya eboniswe ngasentla. Umbala omhlophe ubonelela ngomdla obonakalayo kwaye ukhanyise ukujonga.
Umnyango wangaphambili omnyama yingxelo engqindilili engapheliyo kweli khaya lesiqhelo. Umnyama nomdaka benza indibaniselwano egqibeleleyo njengoko besenza umahluko osesikweni nangona bengathathi cala.
Njengomhlophe nje, i-beige ikwangomnye umbala oguqukayo kwaye oguqukayo. Ikwa hlangothi, yiyo loo nto kukho indawo ethe chatha ekukhetheni umbala ongaphambi komnyango wendlu ye-beige. I-Beige isetyenziselwa izitayile zokwakha eziphefumlelweyo zakudala ezithetha ukuba izindlu ezininzi ezinalo mbala zihlala ziqhelekile kwaye ziyikoloniyali. Nangona kunjalo, ukujija kwanamhlanje kungongezwa ngokukhetha umbala oqaqambileyo womnyango wangaphambili. Nazi ezinye zeengcebiso zethu zemibala engaphambili yomnyango wendlu ye-beige:
Yesintu: Imibala ethulisiweyo kunye neyona nzulu njenge-sage green, moss green, mnyama ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka nobomvu obumnyama
Namhlanje: Ubomvu obomvu, i-carmine, i-vermilion, i-violet kunye ne-turquoise
Okwangoku : Ipeyinti emdaka okanye amabala emithi afana ne-mahogany, i-walnut, njl
Eyona mibala ilungileyo : Imibala ebomvu, eluhlaza okwesibhakabhaka kunye emdaka
Olu klasi lucango lwangaphambili olumhlophe luzisa ucoceko, umoya ombi kule ndawo inemibala yesanti. Olunye udibaniso lweklasikhi, oku kujongeka ngokuqinisekileyo ngekhe kuphume kwisitayile.
Ngwevu yenye yeendlela zangoku zombala omhlophe wemveli. Uninzi lwabanini makhaya luhamba nayo njengoko ingadinisi kakhulu okanye ikhangeleka ngokucacileyo. Kuba ikwangumbala ongathathi hlangothi, ukukhetha umnyango wangaphambili wendlu engwevu nako kulula. Thatha umahluko kwinzuzo yakho njengendlu epholileyo engwevu kunye nentsimbi engwevu ihlala isebenza kakuhle ngemibala enzulu, etyebileyo kunee-hues ezikhanyayo. Nazi ezinye zezindululo zethu zemibala engaphambili yomnyango wendlu engwevu:
Yesintu: Imibala etyebileyo kunye nobunzulu efana ne-burgundy, purple kunye ne-blue blue, enezinto ezimhlophe ezimhlophe
Namhlanje: I-yellow eqaqambileyo okanye i-mustard edibene neengubo ezimhlophe. Iingcango ezibomvu zangaphambili zentsimbi ezingaphandle zenze ingxelo eyothusayo.
Olunye ukhetho: Iiblues ezikhanyayo, ikorale, imfusa, iorenji ebomvu, ivermilion
Eyona mibala ingaphambili yomnyango yile: Mthubi, bomvu, orenji
Le ndlu ye-beige yangaphandle ine-cerulean emnyango ongaphambili oluhlaza okwesibhakabhaka kwaye inyanzeliswa ziintyatyambo ezipinki. Umbala opholileyo womnyango wangaphambili uzisa imo yokuzola kunye noxolo kwinkangeleko yendawo yonke /
Mthubi isenokungathandwa njengabangathathi cala kwizinto zangaphandle, kodwa banikezela ngomtsalane wekottage kwaye zihlala zisetyenziselwa izindlu zecape cod. Umthunzi okhanyayo, njengombala ophuzi ongaphandle usebenza kakuhle ngeengcango zangaphambili ezimnyama.
Yesiko okanye yeklasikhi: Umnyango omnyama, omhlophe okanye we-beige odityaniswe ngombala omhlophe
Namhlanje Ubomvu obomvu okanye icobalt eluhlaza okwesibhakabhaka
Okwangoku: Ipeyinti engwevu kunye emdaka okanye amabala emithi afana ne-mahogany, i-walnut, njl.
Imibala emihle yile: Bomvu kwaye luhlaza okwesibhakabhaka njengoko besenza umahluko omkhulu
Iminyango engaphambi kweBlue lukhetho oluthandwayo kwizindlu ezityheli njengoko esi sibini sidala umahluko kunye nokuthantamisa okungafaniyo.
Ingaphandle lendlu yezitena kukulawula simahla xa kufikwa kumba wokudibana nombala womnyango wangaphambili. Iza ngeendlela ezahlukahlukeneyo, ukusuka kwizityebi ezibomvu, i-terracotta efudumeleyo kunye ne-cala. Izitena ezibomvu azingombala ubomvu ngombala njengoko zine-undertones emdaka. Le mibala isisiseko inokusebenza njengesikhokelo sokumisela umbala ongaphambili kwindlu yakho.
Xa ukhetha umbala wangaphambili wendlu ebomvu yezitena, kubalulekile ukuthatha isitayile sokwakha sendlu esiqwalaselweyo. Umzekelo, ukufezekisa isitayile esingokwesiko esingaphezulu, simbhangise ngomnyango wangaphambili oqhelekileyo nonqande ukungathathi cala njengomnyama, ngwevu okanye mhlophe.
Ngelixa ujonge ukubonakala okwangoku, ukhetho lombala emnyango wakho wangaphambili lunokwandiswa lube yiphalethi eyonwabisayo. Ngaphandle kwalonto, jonga kwizinto okanye indawo ejikeleze indlu yakho yezitena-ukuba indlu ebomvu yezitena ime ehlathini njengokumisa, hamba nomnyango ongaphambili oluhlaza okanye omdaka. Ukongeza iindidi zemixube, kugqitywe ukugcwala okuphezulu kwiminyango engaphambili ingakumbi ukuba izitena zirhabaxa. Kwakhona, zama ukunqanda imibala engqubanayo nombala wezitena zakho. Umzekelo, ucango lwangaphambili olu pinki aluhambi kakuhle ngezitena ezibomvu kuba luyothusa kakhulu.
Eyona mibala ingaphambili yomnyango Iingcango zangaphambili zaseBrown okanye zaseMahogany zilungele isibheno sendabuko. Iingcango zangaphambili eziluhlaza ezomeleleyo zinika umahluko wale mihla. Iingcango zangaphambili zetal zinika into ehlaziyiweyo wow eyenza ukuba ibe yindawo ekugxilwe kuyo. Umnyango wangaphambili obomvu omfusa unika iziphumo ezihambelanayo. Iingcango zangaphambili ezingwevu okanye eziluhlaza ngaphambili zilungele umahluko ocacileyo. Iingcango zangaphambili ezimnyama nazo zijongeka zilungile kwizindlu ezibomvu zezitena ingakumbi ukuba zidityaniswe nezixhobo zebronze kunye nezinto ezimhlophe ezimhlophe.
Kuphephe : Imibala ebomvu njengoko benotyekelo lokufana kakhulu nombala wezitena.
Umnyango wangaphambili omnyama usebenza kakuhle ngezindlu ezibomvu zezitena ngenxa yendlela yayo yesiqhelo kunye nobuhle besibindi. Olu luyilo luye lwasebenzisa ii-shutter eziluhlaza okwesibhakabhaka, iifilim ezimhlophe kunye neentsika ezimhlophe ezithambisa ukwakheka kwesithuba.
Izindlu zezitena eziBrown nazo zijongwa njenge-canvass eguqukayo xa kufikwa ekukhetheni umbala ongaphambi komnyango. Kuba iyitoni yomhlaba ongathathi hlangothi, ukubhangqwa kulula kakhulu njengoko kuhamba kakuhle noluhlu olubanzi lwemibala. Oku kuyakuxhomekeka kwisitayile ofuna ukufeza incasa yakho kunye nokhetho lwakho.
Nangona kunjalo, sisivumelwano esomeleleyo sesikimu esisebenzayo se-monochromatic. Ukufezekisa okunjalo, khetha i-hue ethile kwiitoni eziphantsi ezahlukeneyo zezitena ezimdaka kwaye uyisebenzise njengombala womnyango wakho wangaphambili. Iipeyinti ezimdaka ngombala ezinje nge-tan, isanti, i-mocha okanye amabala amdaka njenge-mahogany, i-walnut, i-oki okanye i-maple konke kuhamba kakuhle nolu hlobo lwangaphandle lwendlu.
Eyona mibala ingaphambili yomnyango : Iingcango zangaphambili ezinemibala yomhlaba zigqibelele ubume bendabuko obunemonochromatic. Imfusa lukhetho olufanelekileyo ukuba ufuna ukongeza umbala wepunch. Unokuzama ukukhetha umbala ocacileyo onje nge-mustard etyheli, amalahle angwevu, orenji, luhlaza okwesibhakabhaka, i-pear eluhlaza, obomvu oqaqambileyo kunye ne-turquoise okanye i-teal ye-vibe yanamhlanje.
Imibala yeetoni ezinqabileyo ezinje nge-denim eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nehlathi eliluhlaza lihlangana kakuhle nobutyebi bezitena ezimdaka. Le ndibaniselwano ifaka imibala efudumeleyo kunye nee-hues ezipholileyo ezenza ukubukeka okufanelekileyo.
Xa kuziwa ekukhetheni umbala ongaphambi komnyango wendlu emhlophe yangaphandle, amathuba anokuphela kuba umhlophe unokuhamba kakuhle phantse ngayo nantoni na. Umhlophe ngumbala oguqukayo kwaye oguqukayo ke ngoko ukudibanisa kunye nokudibanisa iphalethi yangaphandle ngumsebenzi olula. Ukusuka kokungafaniyo okucacileyo kuyo yonke into emhlophe emhlophe, ibonelela ngendawo yokuvavanywa njengendlu emhlophe eyahlukileyo kunombhobho ongenanto olindele ukuzaliswa bubugcisa. Imibala yangaphambili yomnyango iya kuxhomekeka kukhetho lomntu kunye nokhetho kwisitayile. Nazi ezinye zezindululo zethu zemibala engaphambili yendlu emhlophe:
Yesintu: Imibala etyebileyo kunye nobunzulu efana nomnyama, umdaka, umnquma okanye iburgundy
Namhlanje: Amathoni aqaqambileyo kwaye anempilo afana nephuzi, orenji, cobalt bhlowu okanye bomvu
Okwangoku: Ipeyinti emdaka okanye amabala eenkuni afana ne-mahogany, i-walnut, njl.
Yonke imhlophe: Khetha ithoni emnyama ngobunzulu be beige, ukhilimu okanye indlovu
ikude kangakanani sedona kwi-las vegas
Eyona mibala ingaphambili yomnyango yile: Olubomvu, omnyama, oluhlaza kunye noblowu omnyama
Umnyango opholileyo ongwevu wangaphambili wenza umahluko othintelweyo ngaphandle kokuphambuka kubundilele bale ndlu imhlophe incinci yangaphandle. Apha sibona ukuba izindlu ezimhlophe zihambelana kakuhle nemibala engaphambili yomnyango, nokuba ziithoni ezikhanyayo.
Umnyango wangaphambili omnyama kwi-facade emhlophe yi-combo engapheliyo eya kuhlala iminyaka.
Iingcango zangaphambili zidlala indima ebaluleke kakhulu kwi-feng shui kuba kukholelwa ukuba yindlela enamandla yamandla aqinisekileyo. Umnyango wangaphambili waziwa ngokuba ngumlomo weChi, okanye indawoapho indlu ifumana kwaye ifunxe amandla okondla. Yicinge njengomazibuthe omkhulu wamandla afanelekileyo anje ngeentsikelelo, ubutyebi, ukuchuma, impumelelo kwishishini, ukuthanda ubomi, umtshato olungileyo, impilo, impilo-ntle, udumo, udumo kunye nomsebenzi ophumelelayo.
Ngaphambi kokuba singene nzulu kunye nemibala ecetyiswayo yekhaya lakho, singathanda ukukunika umbono olula we-Feng Shui ukukunceda uqonde ukuba isebenza njani. UFeng Shui ikakhulu malunga nokuyila indawo kwindawo ethile yokuziqhelanisa okanye ulwalathiso ngokunxulumene nokuhamba kwamandla wamandla or Chi okanye Qi. Inceda ekuboneni ukuba amandla angamkelwa njani, angeniswe okanye agxothwe ngaphakathi nangaphandle kwekhaya lakho. I-Chi okanye amandla aqinisekileyo ayenziwe kwaye axhonywa zizinto ezahlukeneyo. Izinto ze-feng shui zisekwe kwithiyori ezintlanu eziyinkuni, umlilo, umhlaba, isinyithi kunye namanzi. Ngokwemigaqo ye-feng shui, umjikelo wezinto ezivelisayo ufumaneka ngokutya izinto ezilawulayo kunye nezinye izinto.
UFeng shui ukholelwa ukuba amandla onke ekhaya aya kuxhomekeka kakhulu kumgangatho womnyango wangaphambili okanye ukungena okuyintloko endlwini. Unoko engqondweni, kukho izinto ezininzi ekufuneka zithathelwe ingqalelo ukuguqula indlu yakho ibe yindawo yokuhlala yamandla abukhali kwaye anamandla.
Okokuqala, eyona nto iphambili ekuyileni iingcango zangaphambili ngokuhambelana nemigaqo ye-feng shui yile ulwalathiso . Ukongeza kuloo nto, i-feng shui ikwangokuphumelela ukulingana kunye nokuvisisana . Kodwa uyidibanisa njani le migaqo iphambili?
Ukutsala i-Chi elungileyo kunye nokusebenzisa awona mandla mhle ekhayeni lakho, ucango lwangaphambili kufuneka luhambelane nezinto zalo. Ngaphandle kwelo, izinto ezilawulayo kufuneka zondliwe ngamanye amanqaku ukugcina ulungelelwaniso, kwaye eyona yoyilo ifeng shui kufuneka yondle eyona nto iphambili ye-feng shui ehambelana nolwalathiso olujongwe ngumnyango wangaphambili.
Usebenzisa njani oku? Indlela elula yokwenza umnyango oqinileyo we-feng shui kukufumana uyilo olufanelekileyo kuwo. Umzekelo, ukuba unomnyango ojonge eMpuma, jolisa ekomelezeni into elawula le ndlela, eyinto yomthi.
Enye yeendlela ezicetyiswayo zokondla izinto kunye nokugcina umnyango wemigca ehambelana nolwalathiso lwayo kukubayipeyinte ngombala ofanelekileyo. Imibala kunye nokuhonjiswa kudlala indima ebalulekileyo ekuziseni ithamsanqa, ulingano kunye nokuvumelana ekhaya, ngokwemigaqo ye-feng shui. Into nganye ye-feng shui inombala othile omiselweyo. Ngaphandle kwale mibala iphambili evela kwizinto ezilawulayo kwicala ngalinye, kukho ezinye iindlela onokuzama kuzo ukuba azingqinelani nekhaya lakho. Eminye imibala ekhuthazwayo iyalelwa ngokuhambelana nezinto ezondlayo ze-feng shui.
Uwukhetha njani umnyango wangaphambili Umbala weFeng Shui ? Nantsi eminye imibala ekucetyiswa ngayo iingcango eziphambili ngokungqinelana nezinto zomkhombandlela:
Umnyango waseMpuma Umnyango wangaphambili ojonge kwicala elingasempuma ulawulwa ngu iinkuni Into ye-feng shui. Umnyango wasempuma nawo ufuzisela usapho kunye nentwasahlobo. Imibala yezinto zemithi ifana nemibala yemithi kunye nendalo, ke kuyacetyiswa ukuba iingcango zasempuma zipeyintwe ngombala omdaka okanye oluhlaza ukuzisa amandla aqinisekileyo. Ukuba le mibala iphambili ayisebenzi ekhayeni lakho, ungasoloko ujonga ezinye iinketho ngokusekwe kwezinye izinto ezimbini ezinesondlo.
Into yeenkuni ifumana isondlo kumanzi kwaye ixhaswa yinto yomhlaba. Imibala iluhlaza okwesibhakabhaka kunye nomnyama kwizinto zamanzi zefeng shui, ukukhanya okuluhlaza kunye neetoni zesanti (iitani kunye nemibala emdaka) kumhlaba wefeng shui. Izinto ezonakalisayo ze-feng shui zento yeenkuni ngumlilo kunye nesinyithi, ke thintela imibala yazo kuba zigxotha amandla aqinisekileyo. Ngokubanzi, eyona mibala mihle yokujongana nomnyango ongasempuma imdaka, luhlaza, bhlowu, mnyama, tyheli kunye nezinye iithowuni zomhlaba. Gwema imibala efana nobomvu, imfusa, ngwevu nomhlophe.
Umnyango weSouth East -Umnyango osemazantsi empuma ulawulwa yinto enye ye-feng shui yomnyango osempuma, onguwo iinkuni element. Ithathelwa ingqalelo njenge umnyango wempumelelo Kwaye kuthiwa kutsala amandla afanelekileyo ahambelana nemali, ubutyebi kunye nentabalala. Eyona mibala mihle kumnyango osemazantsi mpuma yimibala eluhlaza kunye nomdaka. Kuyafana nomnyango wasempuma, izinto ezondlayo ze-feng shui zizinto zamanzi, ezithathwa njengophawu lwendalo yonke yokuhamba kakuhle, kunye nomhlaba.
Ukhetho lombala olongezelelekileyo lubandakanya oluhlaza okwesibhakabhaka nomnyama (kwinto yamanzi), iithoni ezityheli kunye nesanti (into yomhlaba). Gwema imibala emele umlilo kunye nezinto zetsimbi ze-feng shui njengoko zonakalisa ukhuni. Ngokubanzi, eyona mibala mihle kumazantsi empuma ejongene nomnyango omdaka, luhlaza, luhlaza okwesibhakabhaka, mnyama, tyheli kunye nezinye iithowuni zomhlaba. Gwema imibala efana nobomvu, imfusa, ngwevu nomhlophe.
Umnyango osemazantsi -Umnyango osemazantsi kuphela kolwalathiso olulawulwa yinto ye-feng shui umlilo . Amandla e-bagua feng shui ahambelana nale ndlela udumo nodumo . Imibala egqwesileyo yeminyango engaphambili ejongene nolu cala bomvu, yomelele, tyheli, iorenji enzulu, imfusa, pinki emnyama okanye magenta. Isixhobo somlilo se-feng shui sondliwa yinto yomthi, ngoko ke ezinye iindlela zokukhetha umbala zibandakanya okuluhlaza okomdaka.
Izinto ezonakalisayo ze-feng shui zolu lwalathiso zizinto zamanzi kunye nomhlaba, ke thintela imibala ehambelana nezi zinto. Ngokubanzi, eyona mibala mihle yokujongana nomnyango wangaphambili oBomvu, omthubi oqinileyo, orenji onzulu, omfusa, opinki omnyama okanye we-magenta, imibala eluhlaza nelimdaka. Gwema imibala efana neblue emnyama kunye neminye imibala yomhlaba okanye enesanti.
Umnyango weSouthwest -Umnyango osemazantsi-ntshona ulawulwa yinto ye-feng shui umhlaba . Amandla e-bagua feng shui ahambelana nale ndlela amandla oomama . Ke ukuba ufuna ukutsala umdla kubomi bakho bothando kunye nomtshato owonwabileyo, penda umnyango wakho wasezantsi ntshona kumbala ofanelekileyo ngokwezi zikhokelo. Eyona mibala mihle kwiminyango engaphambili ejongene nolu cala ziithoni ezikhanyayo zityheli kunye nomhlaba okanye imibala yesanti.
Isixhobo somhlaba se-feng shui sondliwa yinto yomlilo, ke ezinye iindlela zokhetho zibandakanya obomvu, omthubi oqinileyo, iorenji enzulu, imfusa, umbala omnyama opinki okanye imagenta. Izinto ezonakalisayo ze-feng shui zolu lwalathiso zizinto zamanzi, izinto zomthi kunye nezinto zentsimbi, ke thintela imibala ehambelana nezi. Ngokubanzi, eyona mibala mihle kumazantsi oMnyango oJongene nomnyango ziithoni ezikhanyayo mthubi kunye nomhlaba okanye imibala yesanti, obomvu, omthubi oqinileyo, orenji enzulu, omfusa, omnyama, opinki okanye wemagenta. Gwema imibala efana neblue, mnyama, luhlaza, mdaka, mhlophe, ngwevu.
Ngasentshona -Umnyango ojonge ngasentshona ulawulwa ngu isinyithi Into ye-feng shui. Amandla e-bagua feng shui ahambelana nale ndlela abantwana kunye nobuchule bokuyila . Eyona mibala mihle kwiminyango engaphambili ejongene nolu cala imhlophe ingwevu. Isixhobo sesinyithi se-feng shui sondliwa lilungu lomhlaba, ke ezinye iinketho zombala zibandakanya ukukhanya okumthubi, iithoni zomhlaba okanye imibala yesanti. Izinto ezonakalisayo ze-feng shui zolu lwalathiso zizinto zamanzi kunye nezinto zomlilo, ke thintela imibala enje ngombala omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, omthubi oqinileyo, orenji anzulu, omfusa, opinki mnyama okanye we-magenta. Ngokubanzi, eyona mibala mihle yokujongana nomnyango ongaphambili waseNtshona zimhlophe, ngwevu, mthubi ukukhanya kunye neetoni zomhlaba okanye imibala yesanti.
Umnyango osemantla ntshona -Uyafana nomnyango wasentshona, umnyango ojonge emantla ntshona ulawulwa ngu isinyithi Into ye-feng shui. Amandla e-bagua feng shui ahambelana nale ndlela abantu abancedisayo kunye neentsikelelo . Eyona mibala mihle kwiminyango engaphambili ejongene nolu cala imhlophe ingwevu. Isixhobo sesinyithi se-feng shui sondliwa lilungu lomhlaba, ke ezinye iinketho zombala zibandakanya ukukhanya okumthubi, iithoni zomhlaba okanye imibala yesanti.
Izinto ezonakalisayo ze-feng shui zolu lwalathiso zizinto zamanzi kunye nezinto zomlilo, ke thintela imibala enokuthi inciphise umtsalane wamandla aqinisekileyo. Ngokubanzi, eyona mibala mihle yokujonga umnyango ongasemantla ntshona umhlophe, ngwevu, mthubi ukukhanya kunye neetoni zomhlaba okanye imibala yesanti- ngolungelelwaniso lobumnandi. Kulumkele imibala enje ngombala omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka, obomvu, omthubi oqinileyo, oorenji onzulu, omfusa, opinki omnyama okanye wemagenta.
Umnyango osemantla -Umnyango osemazantsi empuma ulawulwa yinto ye-feng shui amanzi . Kucatshangelwa ukutsala amandla afanelekileyo ahambelana nawo ikhondo lomsebenzi kunye nendlela ebomini . Imibala egqwesileyo yomnyango ojonge emantla yimibala emnyama neblue. Isondlo esondlayo samanzi e-feng shui sisinyithi, okuthetha ukuba ukhetho olongezelelekileyo lombala lubandakanya okumhlophe kunye nokungwevu.
Gwema imibala emele umhlaba kunye nezinto zomlilo ze-feng shui njengoko zonakalisa izinto ezilawulayo zamanzi. Ngokubanzi, eyona mibala mihle yokujongana noMnyango ongasemantla imnyama, luhlaza okwesibhakabhaka, mhlophe kwaye ingwevu. Kulumkele imibala enje ngombala oluhlaza, omdaka, obomvu, omthubi omeleleyo, oorenji onzulu, omfusa, omnyama opinki okanye omagenta.
Umnyango osemantla mpuma -Kulawulwa ngu umhlaba Into ye-feng shui, umnyango wasempuma-mpuma uthathwa njengomnyango otsala i-bagua feng shui amandla okukhula ngokomoya nokulima. Ukutsala umdla kule mimandla, kuyacetyiswa ukuba umnyango ojonge emantla mpuma upeyintwe ngombala otyheli kunye nomhlaba okanye iithoni zesanti. Izinto ezilawulayo kwelicala zondliwa yinto yomlilo ye-feng shui, ke eminye imibala ekhuthazwayo ibandakanya obomvu, omthubi oqinileyo, orenji onzulu, omfusa, opinki osisityebi okanye wemagenta
Izinto ezonakalisayo zefeng Shui zomnyango osemantla mpuma ziinkuni, isinyithi kunye namanzi ke thintela imibala enxulunyaniswa nezi. Ngokubanzi, eyona mibala mihle yokujonga umnyango ongasemantla mpuma ukukhanya okukhanyayo, imibala yomhlaba okanye iisanti ezibomvu, omthubi oqinileyo, orenji enzulu, omfusa, opinki osisityebi okanye wemagenta. Veer kude nemibala enje ngee-shades eziluhlaza, ezimdaka, ezimhlophe, ezingwevu, luhlaza okwesibhakabhaka kunye nomnyama.
Umnyango ongaphambili omhlophe ulinganisa umphandle oluhlaza weli khaya lasekhaya eliqhelekileyo. Idityaniswe ngocingo olumhlophe lwepikethi, iifestile ezimhlophe zaseFransi kunye nesitayile, inika umbono wengcinga efanelekileyo yoyilo loyilo. Imibala engaphambili yomnyango ehambelana nokuhonjiswa kwangaphandle okunjengokubiya inokusinyusa isibheno somda kwaye yenze uyilo oluhambelanayo oya kuluthanda.
Umbala wombala ongaphandle wendlu uqulethe ikakhulu imibala yomnyango wangaphambili, umzimba wendlu kunye neetreyini. Nje ukuba imibala yezinto zokuqala ezi-2 imiselwe, ngoku lixesha lokuba uthathe isigqibo ngemibala oza kuyisebenzisa ukupeyinta iingcango zomnyango, iifestile kunye nezinye izinto zokuhombisa ezingaphandle kwendlu. Abanye abaninimzi bakuthatha oku njengomsebenzi onzima kodwa ngokuchasene nale nkolelo, ukukhetha umbala omncinci wendlu yakho akufuneki ukuba ube nesakhono sobugcisa.
Kukho iindlela ezininzi zokuthatha isigqibo sokuba ngowuphi umbala wombala osebenza kwinkangeleko ekhayeni lakho. Enye yokwenza iskimu sakho sokugqibela sombala ngokunxulumene nombala wombala womnyango wakho wangaphambili kunye neendawo ezisezindlwini, ngelixa elinye ulisekele kwisitayile sekhaya lakho. Nokuba yeyiphi na indlela, akukho mthetho ngokubanzi wokukhetha imibala ye-trim kuba uyilo lumalunga nokhetho lomntu kunye nokukhetha. Kodwa ukuba ufuna uncedo, nazi izikhokelo onokuzilandela kwimizobo yokupenda enemibala eyahlukeneyo:
Ipeyinti inciphise ngokwendlela yendlu yakho Izimbo zoyilo zihlala zibeka imibala yeephalethi- zizityebi, zinzulu kwaye zinobunkunkqele bezindlu zama-Victorian, zisentsha kwaye zikhanyisile izindlu zaseCottage, zifudumele izindlu zaseRustic, zithuliselwe amakhaya amaKoloniyali, zintle kwizindlu zale mihla. Ukuchonga isitayile sendlu yakho kunokukunceda uthathe isigqibo sokuba yeyiphi imibala ekufuneka isebenze. Ukugqiba ukunqunqa ngendlela yangoku, yipeyinte imibala emibini emnyama ngaphandle kwendlu yakho yangaphandle. Ukuba ufuna ukufezekisa inkangeleko yesiNtu, thelekisa imibala emincinci enekhrim okanye emhlophe. Kwizindlu zamatye ze-rustic, i-trim zihlala zihambelana nombala we-grout okhoyo.
Ipeyinti inciphisa ukudibanisa umbala wakho wangaphambili -Awusoze uhambe gwenxa ngombala omhlophe njengoko uqhubeka ngombala womnyango wangaphambili. Nangona kunjalo unokuzama ezinye iindlela. Iingcango ezimhlophe zilungile ngombala omdaka mnyama. Iminyango ebomvu nayo ihamba kakuhle ngombala ongwevu okanye isilumko esiluhlaza. Iingcango zangaphambi kweBrown, nokuba zinebala okanye zipeyintiwe, zidibene kakuhle nezithambiso zeethowuni zokhilimu.
Umahluko ngundoqo - Uninzi lwabayili, oku kuthathwa njengenye yemigaqo ephambili yoyilo. Ngokwesiqhelo, imibala ekhaphukhaphu kunocango lwakho kunye neendawo ezisendlini isetyenziselwa ukupeyinta iitrims. Ngelixa imibala emnyama kakhulu kwiskimu sombala ihlala isetyenziselwa iivali kunye neefestile ukubenza babonakale ngathi bayahlehla kwi-facade.
ipuli yomlambo eyonqenayo emva kwendlu
Gwema imibala emininzi kwimibala - Ncamathela kumbala omnye wezinto ezime nkqo nezithe tye ngaphandle kwendlu yakho. Imibala emininzi kakhulu inokubangela isiphithiphithi esibonakalayo.
Sukukhetha umbala wombala ongahambelaniyo nombala wakho -Kulungile ukuba luvavanyo kodwa ungagqithi ngaphezulu. Ngaphandle kokuba uyila ikhaya lama-Victorian elifuna ukuba zonke izinto zokwakha zipeyintwe ngombala owahlukileyo, kunqande ukukhetha imibala engahambelani kwaphela nephalethi yangaphandle yendlu yakho. Umzekelo, indlu engwevu enomnyango obomvu akufuneki ibe nezinto ezipinki.
Iphalethi yombala wangaphandle elungelelaniswe kakuhle ihlala inemibala emi-5. Umbala omnye womnyango wangaphambili, umbala wesibini weetreyimu, umbala wesithathu kwicala elingaphandle okanye umzimba wendlu (owona mbala ubalaseleyo), umbala wesine wophahla kunye nombala wesihlanu kukongeza isandi ihlala isetyenziselwa iivali kunye nezinye izinto zokwakha kunye neenkcukacha. Nangona kunjalo, uninzi lwabanini makhaya zihlala zinamathela kwimibala emi-3 kuphela.
UKUYA peyinta umbala wokubonakalayo Inkqubo inokukunceda ufumane umbala ofanelekileyo wekhaya lakho. Sebenzisa le software ulayishe umfanekiso wendlu yakho kwaye uzame imibala eyahlukeneyo ezindongeni nasemnyango.
Iimpawu ezimhlophe ziyintandokazi yeklasikhi kwizindlu ezininzi njengoko zisebenza kakuhle nangayo nayiphi na imibala yomnyango wangaphambili kunye nemibala yangaphandle.
Ndwendwela igalari yethu Izitayile zomnyango wangaphakathi ukubona ezinye izimvo ezinxulumene zasekhaya kunye nenkuthazo.
yenza isaphetha ngentambo enentambo
ibhedi phantsi kwefestile
ubungakanani bomnyango we-closet esemgangathweni
Isitshixo sokutshisa amayeza e-bikini
i-airbrush makeup pros and cons